Ity Application ity dia manangona angona manokana avy amin'ireo mpampiasa azy.
Angon-drakitra manokana nangonina ho an'ity tanjona manaraka ity sy mampiasa ireto serivisy manaraka ireto:
Fahazoana miditra amin'ny kaontin'ny servisy an'ny antoko fahatelo
Fidirana amin'ny kaonty Facebook
Fahazoan-dàlana: Amin'ny fisoratana anarana amin'ny app, tianao ary apetaho amin'ny rindrina
Fandraisana amin'ny kaonty Twitter
Data manokana: amin'ny fisoratana anarana amin'ny app sy karazana data isan-karazany
Fanehoan-kevitra momba ny atiny
Data manokana: Data momba ny cookie sy ny fampiasana
Fifandraisana amin'ny tambajotra sosialy ivelany sy ny sehatra
Bokotra Facebook Like, widgets sosialy
Data manokana: cookie, data fampiasana, mombamomba ny mombamomba
Data Controller sy tompona
Anisan'ireo karazana Data manokana izay angonin'ity Fampiharana ity, amin'ny alalany na amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo, dia misy: Data Cookie sy Usage.
Ireo angona manokana voahangona dia azo faritana ao amin'ny faritra hafa amin'ity politika momba ny tsiambaratelo ity na amin'ny alàlan'ny lahatsoratra fanazavana manokana miaraka amin'ny fanangonana Data.
Ny Data manokana dia mety omen'ny Mpampiasa maimaimpoana, na voaangona ho azy rehefa mampiasa ity Application ity.
Ny fampiasana Cookies - na fitaovana fanarahana hafa - amin'ity Fampiharana ity na avy amin'ny tompona serivisy antoko fahatelo ampiasain'ity Fampiharana ity, raha tsy voalaza amin'ny fomba hafa, dia manondro ny mpampiasa sy mahatadidy ny safidiny, ho an'ny tanjona tokana omena ny serivisy takian'i ny Mpampiasa.
Ny tsy fanomezana data manokana dia mety tsy hahafahan'ity Fampiharana ity hanome ny serivisy.
Ny mpampiasa dia miantoka ny andraikiny amin'ny angon-drakitra manokana an'ny antoko fahatelo navoaka na nozaraina tamin'ny alàlan'ity Fampiharana ity ary nanambara fa manan-jo hifampiresaka na handefa azy ireo, ka hanamaivana ny adidy rehetra momba izany.
Fomba sy toerana fikirakirana ny Data
Ny Data Controller dia manodina ny angon-drakitra ho an'ny mpampiasa amin'ny fomba sahaza azy ary handray fepetra fiarovana mety hisorohana ny fidirana, fanambarana, fanovana, na fanimbana tsy ara-dalàna ny Data.
Ny fanodinana angon-drakitra dia tanterahina amin'ny alàlan'ny solosaina sy / na fitaovana avelan'ny IT, manaraka ny fomba fandaminana sy ny fomba mifandraika amin'ny tanjona voalaza. Ho fanampin'ny Data Controller, amin'ny tranga sasany, ny Data dia mety ho azon'ny karazan'olona tompon'andraikitra sasany, tafiditra amin'ny fiasan'ny tranonkala (fitantanana, varotra, marketing, ara-dalàna, fitantanana ny rafitra) na antoko ivelany (toy ny fahatelo mpanome tolotra teknika antoko, mpitatitra mailaka, mpamatsy fampiantranoana, orinasa IT, maso ivoho fifandraisan-davitra) voatendry, raha ilaina, ho Data Processors an'ny Tompony. Ny lisitra nohavaozina an'ireo faritra ireo dia azo angatahina amin'ny Data Controller amin'ny fotoana rehetra.
Ny data dia voahodina ao amin'ny birao fiasan'ny Data Controller sy amin'ny toerana hafa misy ny antoko mifandray amin'ny fanodinana. Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa amin'ny Data Controller.
Ny data dia tazomina mandritra ny fotoana ilaina mba hanomezana ny serivisy nangatahin'ilay Mpampiasa, na nambaran'ny tanjona voalaza ato amin'ity antontan-taratasy ity, ary ny mpampiasa dia afaka mangataka mandrakariva ny Data Controller hampiato na hanala ny angona.
Ny fampiasana ny angona nangonina
Angon-drakitra momba ny Mpampiasa no angonina mba hamela ny Fampiharana hanome ny serivisy, ary koa ho an'ity tanjona manaraka ity: Fahazoana miditra amin'ny kaontin'ny serivisy antoko fahatelo, Famoronana ny mpampiasa amin'ny mombamomba ny fampiharana, fanehoan-kevitra momba ny atiny ary Fifandraisana amin'ireo tambajotra sosialy sy sehatra ivelany .
Ny Data manokana ampiasaina amin'ny tanjona tsirairay dia voalaza ao amin'ireo fizarana manokana amin'ity antontan-taratasy ity.
Fahazoan-dàlana Facebook nangatahan'ity Application ity
Ity Application ity dia mety hangataka alalana amin'ny Facebook mamela azy hanao hetsika miaraka amin'ny kaonty Facebook an'ny Mpampiasa sy hanovozana fampahalalana, ao anatin'izany ny Data manokana, avy ao.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ireto fahazoan-dàlana manaraka ireto dia jereo ny antontan-taratasy fahazoan-dàlana Facebook (https://developers.facebook.com/docs/authentication/permissions/) ary ny politika momba ny tsiambaratelo Facebook (https://www.facebook.com/about / fiainana manokana /).
Ireto ny alalana nangatahina:
Amin'ny alàlan'ny default, tafiditra ao anatin'izany ny mpampiasa sasany's Data toa ny id, anarana, sary, miralenta ary ny toerana misy azy ireo. Misy fifandraisana sasany an'ny mpampiasa, toy ny Friends, misy ihany koa. Raha nanao bebe kokoa ny angon-drakitry ny daholobe ny mpampiasa dia misy fampahalalana bebe kokoa ho hita.
Manome fidirana amin'ny lisitry ny pejy rehetra tian'ny mpampiasa.
Avoahy amin'ny rindrina
Mamela ny fampiharana handefa atiny, fanehoan-kevitra ary tiany amin'ny reniranon'ny mpampiasa sy amin'ny reniranon'ireo sakaizan'ny mpampiasa.
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fanodinana ny angona manokana
Ny angon-drakitra manokana dia angonina ho an'ny tanjona manaraka sy ny fampiasana ireto serivisy manaraka ireto:
Ireo serivisy ireo dia mamela ity Application ity hiditra amin'ny Data avy amin'ny kaontinao amin'ny serivisy antoko fahatelo ary hanao hetsika miaraka aminy.
Tsy mandeha ho azy ireo serivisy ireo fa mila alalana mazava avy amin'ny mpampiasa.
Fidirana amin'ny kaonty Facebook (Ity fampiharana ity)
Ity serivisy ity dia mamela ity Application ity hifandray amin'ny kaontin'ny Mpampiasa amin'ny tambajotra sosialy Facebook, nomen'ny Facebook Inc.
Fangatahana nangataka: Tiana ary avoaka amin'ny rindrina.
Toerana fanodinana: Etazonia - Politikan'ny tsiambaratelo https://www.facebook.com/policy.php
Fidirana amin'ny kaonty Twitter (Ity fampiharana ity)
Ity serivisy ity dia mamela ity Application ity hifandray amin'ny kaontin'ny Mpampiasa amin'ny tambajotra sosialy Twitter, nomen'ny Twitter Inc.
Nangonina ny angon-drakitra manokana: Karazan-tahiry isan-karazany.
Toerana fanodinana: Etazonia - Politikan'ny tsiambaratelo http://twitter.com/privacy
Serivisy maneho hevitra anaty atiny dia mamela ny mpampiasa hanao sy hamoaka ny heviny momba ny atin'ny Fampiharana ity.
Miankina amin'ny fikirana nofidian'ny Tompony, ny mpampiasa dia mety mamela lahatsoratra tsy fantatra anarana ihany koa. Raha misy adiresy mailaka eo amin'ireo angona manokana natolotry ny mpampiasa, dia azo ampiasaina handefasana fampandrenesana fanehoan-kevitra amin'ny atiny iray ihany. Tompon'andraikitra amin'ny atin'ny fanehoan-kevitr'izy ireo manokana ireo mpampiasa.
Raha napetraka ny serivisy maneho hevitra atolotry ny antoko fahatelo, dia mety mbola hanangona angon-drakitra fifamoivoizana an-tranonkala ho an'ireo pejy nametrahana ny serivisy fanehoan-kevitra, na dia tsy mampiasa ny serivisy maneho hevitra momba ny atiny aza ireo mpampiasa.
Disqus dia serivisy fanehoan-kevitra momba ny atiny nomen'ny Big Heads Labs Inc.
Nangonina ny angon-drakitra manokana: Data momba ny cookie sy ny fampiasana.
Toerana fanodinana: Etazonia - Fitsipika momba ny fiainana manokana http://docs.disqus.com/help/30/
Ireo serivisy ireo dia mamela ny fifandraisana amin'ny tambajotra sosialy na sehatra ivelany hafa mivantana avy amin'ny pejin'ity Fampiharana ity.
Ny fifandraisana sy ny fampahalalana azon'ity Fampiharana ity dia iharan'ny mpampiasa foana's setting manokana momba ny tsiambaratelo ho an'ny tambajotra sosialy tsirairay.
Raha misy serivisy ahafahana mifandray amin'ny tambajotra sosialy napetraka dia mety mbola hanangona angon-drakitra fifamoivoizana ho an'ireo pejy nametrahana ny serivisy izy ireo, na dia tsy ampiasain'ny mpampiasa izany.
Bokotra Facebook Like sy widgets sosialy (Facebook)
Ny bokotra Facebook Like sy ny widget sosialy dia serivisy mamela ny fifandraisana amin'ny tambajotra sosialy Facebook nomen'ny Facebook Inc.
Toerana fanodinana: Etazonia - Politikan'ny tsiambaratelo http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
Fampahalalana fanampiny momba ny fanangonana sy fanodinana data
Ny angona manokana an'ny mpampiasa dia azo ampiasaina amin'ny tanjona ara-dalàna avy amin'ny Data Controller, any amin'ny Fitsarana na amin'ireo dingana mitarika amin'ny hetsika ara-dalàna mety hitranga avy amin'ny fampiasana diso ity Application ity na ireo serivisy mifandraika amin'izany.
Ny mpampiasa dia mahafantatra ny zava-misy fa ny Data Controller dia mety takiana amin'ny famoahana angona manokana rehefa angatahan'ny manampahefana imasom-panjakana.
Fampahalalana fanampiny momba ny angona manokana an'ny mpampiasa
Ho fanampin'ny fampahalalana voarakitra ao amin'ity politika momba ny tsiambaratelo ity, ity Fampiharana ity dia mety hanome ny mpampiasa fampahalalana fanampiny sy mihantona momba ny serivisy manokana na ny fanangonana sy ny fanodinana ny angon-drakitra manokana arakaraka ny fangatahana.
Rafitra sy fikojakojana ny rafitra
Ho an'ny tanjona sy ny fikojakojana, ity Application ity sy ny serivisy an'ny antoko fahatelo dia mety manangona rakitra izay mirakitra ny fifandraisan'ity Application ity (System Logs) na ampiasaina ho an'ity tanjona ity Data hafa manokana (toy ny adiresy IP).
Fampahalalana tsy voarakitra amin'ity politika ity
Ny antsipiriany misimisy momba ny fanangonana na fanodinana ny angona manokana dia mety angatahina amin'ny Data Controller amin'ny fotoana rehetra. Azafady mba jereo ny fampahalalana momba ny fifandraisana eo am-piandohan'ity antontan-taratasy ity.
Ny zon'ny mpampiasa
Ny mpampiasa dia manan-jo, amin'ny fotoana rehetra, hahafantatra raha toa ka efa notahirizina ny angon-drakitry ny tenany ary afaka manatona ny Data Controller hianatra momba ny atiny sy ny niandohany, hanamarina ny maha-marina azy ireo na hangataka azy ireo ampiana, nofoanana, havaozina na ahitsy , na noho ny fanovana azy ireo ho endrika tsy fantatra anarana na hanakanana ny angon-drakitra voatazona ho fanitsakitsahana ny lalàna, ary koa ny fanoherana ny fitsaboana azy ireo noho ny antony ara-dalàna rehetra. Ny fangatahana dia tokony halefa amin'ny Data Controller amin'ny fampahalalana mifandraika voalaza etsy ambony.
Ity fampiharana ity dia tsy manohana "Aza manenjika" fangatahana.
Mba hamaritana raha misy amin'ireo serivisy antoko fahatelo ampiasainy dia manome voninahitra ny "Aza manenjika" mangataka, vakio azafady ny politikany momba ny tsiambaratelo.
Fanovana ity politika fiainana manokana
Ny Data Controller dia manan-jo hanao fanovana amin'ity politika momba ny tsiambaratelo ity amin'ny fotoana rehetra amin'ny fanomezana fampilazana amin'ireo mpampiasa azy amin'ity pejy ity. Manoro hevitra anao mafy ny hijery ity pejy ity matetika, manondro ny datin'ny fanovana farany voatanisa etsy ambany. Raha toa ny Mpampiasa iray manohitra ny fanovana iray amin'ny Politika, ny mpampiasa dia tokony hitsahatra tsy hampiasa ity Application ity ary afaka mangataka ny Data Controller hamafa ny angona manokana. Raha tsy hoe misy fanambaràna hafa, ny politika momba ny tsiambaratelo amin'izao fotoana izao dia mihatra amin'ny angon-drakitra manokana ananan'ilay Controller Data momba ny mpampiasa.
Fampahalalana avy amin'ny fampiasana ny Applications
Rehefa mampiasa ny rindrambaiko finday izahay dia mety manangona vaovao sasantsasany ho fanampin'ny fampahalalana voalaza etsy an-kafa amin'ity Politika ity. Ohatra, mety hanangona vaovao momba ny karazana fitaovana sy ny rafitra miasa ampiasainao izahay. Azonao atao ny manontany anao raha te-hahazo fampandrenesana momba ny hetsika amin'ny kaontinao ianao. Raha nisafidy ireo fampandrenesana ireo ianao ary tsy te-handray azy intsony dia azonao atao ny mamono azy ireo amin'ny alàlan'ny rafi-piasanao. Azontsika atao ny mangataka, miditra na manara-maso ny fampahalalana mifototra amin'ny toerana misy anao avy amin'ny fitaovanao finday mba hahafahanao mizaha toetra endri-javatra an-toerana natolotry ny Serivisy na handraisana fampandrenesana poka mifototra amin'ny toerana misy anao Raha nisafidy ny hizara ireo fampahalalana mifototra amin'ny toerana ianao, ary tsy te hizara azy ireo intsony, dia azonao atao ny manapaka ny fizarana amin'ny alàlan'ny rafitra fiasao. Azontsika atao ny mampiasa rindrambaiko famakafakana finday (toy ny crashlytic.com) hahafantarana tsara kokoa ny fomba fampiasan'ny olona ny rindranay. Azonay atao ny manangona vaovao momba ny fotoana ampiasanao ny rindranasa sy ny angona fampisehoana hafa.
Famaritana sy andinin-tsoratra ara-dalàna
Data manokana (na Data)
Ny fampahalalana rehetra momba ny olona voajanahary, ny olona iray ara-dalàna, ny andrim-panjakana na ny fikambanana iray, izay, na azo, fantatra, na ankolaka aza, amin'ny alàlan'ny fampahalalana hafa, ao anatin'izany ny laharan'ny famantarana manokana.
Fampahalalana nangonina ho azy avy amin'ity Fampiharana ity (na serivisy an'ny antoko fahatelo ampiasaina ao amin'ity Application ity), izay mety misy: ny adiresy IP na ny anaran'ny sehatr'ireo solosaina ampiasain'ireo Mpampiasa mampiasa ity Fampiharana ity, ireo adiresy URI (Uniform Resource Identifier), ny fotoana ny fangatahana, ny fomba nampiasaina handefasana ny fangatahana amin'ny mpizara, ny haben'ny rakitra voaray ho valiny, ny kaody isa izay manondro ny satan'ny valintenin'ny mpizara (valiny mahomby, lesoka sns.), ny firenena niaviany, ny endri-javatra ny fitetezana sy ny rafitra miasa ampiasain'ny Mpampiasa, ny antsipiriany isan-karazany isaky ny fitsidihana (ohatra, ny fotoana lanin'ny pejy tsirairay ao anatin'ny Fampiharana) ary ny pitsopitsony momba ny lalana narahina tao anatin'ny Fampiharana miaraka amin'ny firesahana manokana ny filaharan'ireo pejy notsidihina, ary ny masontsivana hafa momba ny rafitra fiasan'ny fitaovana sy / na ny tontolon'ny IT an'ny mpampiasa.
Ilay olona mampiasa an'io Fampiharana io, izay tsy maintsy mifanindran-dàlana na omen'ny Soso-kevitra momba ny angon-drakitra, izay tondroin'ny Data manokana.
Ny olona ara-dalàna na voajanahary izay ananan'ny Data manokana.
Data Processeur (na Data Supervisor)
Ny olona voajanahary, olona ara-dalàna, fitantanan-draharaham-panjakana na rafitra hafa, fikambanana na fikambanana nomen'ny Mpanara-maso Data mba hikirakira ny angon-drakitry ny tena manokana mifanaraka amin'ny politikan'ny tsiambaratelo ity.
Data Controller (na Tompona)
Ny olona voajanahary, olona ara-dalàna, fitantanan-draharaham-panjakana na rafitra hafa, fikambanana na fikambanana manan-jo, ary koa miaraka amin'ny Data Controller hafa, mba handray fanapahan-kevitra momba ny tanjona, sy ny fomba fanodinana ny angon-drakitra manokana sy ny fomba ampiasaina, ao anatin'izany ny fepetra fiarovana momba ny fiasa sy ny fampiasana an'io Fampiharana io. Ny Data Controller, raha tsy voalaza manokana, dia tompon'ny Fampiharana ity.
Ity fampiharana ity
Ny fitaovana fampitaovana na rindrambaiko izay angon-drakitra manokana momba ny mpampiasa.
Data kely voatahiry ao amin'ny fitaovan'ny Mpampiasa.
Fampandrenesana ho an'ireo mpampiasa eoropeanina: ity fanambarana tsiambaratelo ity dia nomanina ho fanatanterahana ny adidy araka ny And. 10 an'ny EC Directive n. 95/46 / EC, ary araka ny voalazan'ny Toro lalana 2002/58 / EC, araka ny fanitsiana nataon'ny Toro lalana 2009/136 / EC, momba ny Cookies.
Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia mifandraika amin'ity Application ity fotsiny.